Posterior Pituitary Injection - တရုတ် Ningbo ဒုတိယအဟော်မုန်း
Posterior Pituitary Injection ကို Posterior Pituitary ဝက် pituitary gland ကနေထုတ်ယူကပြင်ဆင်ထားတဲ့ All-ကသဘာဝထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ [ဖျေါပွခကျြ] ဒီထုတ်ကုန်ဟာအရောင်ပွင့်လင်းသို့မဟုတ်နီးပါးပွင့်လင်းအရည်ဖြစ်ပါတယ်။ [ရာထူးအမည်နှင့်အသုံးပြုမှု] ဒီထုတ်ကုန် oxytocin နှင့် pitressin ပါရှိသည်။ oxytocin ရွေးချယ် uteruses excite နှင့်သားအိမ်ချောမွေ့ကြွက်သားများကျုံ့ခိုင်ခံ့စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သားအိမ်ချောမွေ့ကြွက်သားက၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Vivo အတွက်ဆေးများနှင့်ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသည်။ တစ်ဦးကအငယ်စားထိုး o ...
Posterior Pituitary ဖြစ်ပါတယ် တစ်ခု ဝက်ကနေထုတ်ယူပြင်ဆင် All-ကသဘာဝထုတ်ကုန် pituitary gland ။
ဒီထုတ်ကုန် oxytocin နှင့် pitressin ပါရှိသည်။ oxytocin ရွေးချယ် uteruses excite နှင့်သားအိမ်ချောမွေ့ကြွက်သားများကျုံ့ခိုင်ခံ့စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သားအိမ်ချောမွေ့ကြွက်သားက၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Vivo အတွက်ဆေးများနှင့်ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒီထုတ်ကုန်၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ဆေးထိုးနှောင်းပိုင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ယူနီဖောင်းကျုံ့နှင့်အပန်းဖြေနှင့်အတူသားအိမ်ကြွက်သားစည်းချက်ကျုံ့မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်; ထုတ်ကုန်၏ကြီးမားသောဆေးများသားအိမ်ချောမွေ့ကြွက်သား tetanic ကျုံ့စေခြင်းနှင့် hemostatic သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမှ myometrium အတွက်သွေးကြောကိုနှိပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, oxytocin နို့၏ထွတ်လွယ်ကူချောမွေ့ခြင်း, mammary acini နှင့် mammary ပြွန်ပတ်လည်မှာ myoepithelial ဆဲလ်များ၏ကျုံ့မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ Pitressin antidiuresis နှင့်မြှသွေးပေါင်ချိန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကအားအတွက်လျှောက်ထားသည်:
နို့ထွတ်, mammary ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အသစ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏အမျိုးသမီးတိရိစ္ဆာန်များနို့ကင်းမဲ့မှုအတွက်နို့မြှင့်တင်ရန်၏ 1. မှုဟာသိပ်ရောဂါ; နို့ 1-4 နာရီထိုးပြီးနောက်နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ပါသည်။
2. parturition နှင့် odinopoeia မြန်မြန်ထက်ထက်။
နွားတွေ '' အကြီးအကျယ်သွေးလွန်များအတွက် 3. Hemostasis ။
နို့ထွတ်, mammary ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အသစ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏အမျိုးသမီးတိရစ္ဆာန်များအဘို့နို့မြှင့်တင်ရန်၏ 1. မှုဟာသိပ်ရောဂါနို့ကင်းမဲ့: အသားဆေးထိုးဘို့တစ်ခုတည်းထိုး: ရင့်ကျက်သည်မြင်းများနှင့်တိရစ္ဆာန်များအဘို့ 20-40 ယူနစ်,3ရက်ဆက်တိုက်တကြိမ်တစ်နေ့လျှင်; ရင့်ကျက်သိုးနဲ့ဝက်အဘို့ 10-20 ယူနစ်,3ရက်ဆက်တိုက်တကြိမ်တစ်နေ့လျှင်; ခွေး, ကြောင်, မြေခွေး, racoon-ခွေးနှင့် minks များအတွက် 5-10 ယူနစ်, တစ်ချိန်ကတစ်နေ့3ရက်ဆက်တိုက်။
2. အလျင်အမြန် parturition နှင့် odinopoeia: အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးသို့မဟုတ်အသားဆေးထိုးဘို့တစ်ခုတည်းထိုး: မြင်း, ကျွဲနွားများအတွက် 30-100 ယူနစ်; သိုးများနှင့်ဝက်အဘို့ 10-50 ယူနစ်; ခွေးအဘို့အ 2-10 ယူနစ်; ကြောင်များအတွက် 2-5 ယူနစ်။
နွားတွေ '' အကြီးအကျယ်သွေးလွန်များအတွက် 3. Hemostasis: သွေးကြောသွင်းဆေးထိုး; (ဂလူးကို့စသို့မဟုတ်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ဆေးထိုး၏ 500ml မှထည့်ပြီး) တစ်ခုတည်းထိုးဘို့ 100-150 ယူနစ်။
4. မှုဟာသိပ်သားအိမ်သွေးထွက်ခြင်းနှင့်သန္ဓေသားအမြှေးပါးထိန်းသိမ်းထား: အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးသို့မဟုတ်အသားဆေးထိုးဘို့တစ်ခုတည်းထိုး: မြင်း, ကျွဲနွားများအတွက် 30-100 ယူနစ်; သိုးများနှင့်ဝက်အဘို့ 10-50 ယူနစ်; ခွေးအဘို့အ 2-10 ယူနစ်; ကြောင်များအတွက် 2-5 ယူနစ်။
1. မွေးဖွားတူးမြောင်းမူမမှန်, ပုံမှန်မဟုတ်သောသန္ဓေသားအနေအထားနှင့်သေး-to-ပွင့်လင်းသားအိမ်ခေါင်းအတွက်လုပ်အား၏အချိန်အနီး Contraindicated ။
2. အမြင့်ဆေးများသွေးပေါင်ချိန်, oliguria နှင့်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုမြင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
10 x ကို 1ml: 10 ယူနစ်
(20 ℃၏အပူချိန်အောက်မှာ) မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်အေးမြသောနေရာတွင် Shaded နှင့်သိုလှောင်ထား။
ယခင်: Injection ကိုများအတွက် Pituitary Luteinizing ဟော်မုန်း (LH)
နောက်တစ်ခု: Injection ကိုများအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum gonadotropin (PMSG)
Cloprostenol ဆိုဒီယမ် Injection (ဃအမျိုးအစား PG)